Sibhedlela, ikakhulukazi labo esisogwini olusentshonalanga, namuhla athandwa kakhulu. Mina yayiphumula resort Yeisk "Yeisk". Le ndawo enhle inikeza hhayi kuphela indinganiso efanele eziphilayo kanye nokungcebeleka, kodwa futhi okusezingeni eliphezulu nokwelashwa izinga. Ungabheka kanjani zokungcebeleka Eisk?
Sibhedlela "Yeisk": indawo
Yiqiniso, zonke isihambi ezingaba nentshisekelo yalokhu yizinto ezingabalulekile Yeisk, ukuzilibazisa, kulesi sibhedlela phakathi edolobheni, izimo zokuphila, nokunye. D. Lokhu resort impilo itholakala endaweni ezimangalisayo oluhlaza nokunokuthula ephakathi ye Yeisk, ku Krasnodar esifundeni.
Naphezu kweqiniso lokuthi resort itholakala Sinentshisekelo, izivakashi ngeke siphazamise noma umsindo wezimoto, noma ukuchichima abantu. Lena indawo enhle nge ezitaladini ihlanzekile. Futhi sisondelene kakhulu izitolo, izindawo zokudla kanye nokungcebeleka ipaki esikhulu yaqanjwa Ivan Poddubny.
INCAZELO OMFUSHANE imitholampilo sibhedlela
Ngokuthakazelisayo, lokhu resort lakhiwa ngo-1921. Yiqiniso, njengoba njalo olusha futhi ngcono. I sibhedlela has a endaweni elikhulu nje insimu ka 6.3 amahektha. imibhede Manicured imbali, amabhentshi ukhululekile, izindlela ngezinyawo - yilokho balindelwe izivakashi resort.
I sibhedlela siqukethe izakhiwo eziningana - zokulala ezintathu, igumbi lokudlela futhi ihholo ekhonsathini, kanye izikhungo zokuxilonga kanye nokwelashwa.
Ukwelashwa nokuvikelwa yisiphi isifo wenziwa endaweni kulesi sibhedlela?
Abantu nezifo eziningi ukuza kulesi sibhedlela "Yeisk". Kursovkam lapha ingahlala izinsuku 21-24 (ikhambi eliphelele) noma egcinwe uhlobo encishisiwe (izinsuku 12-15).
Kunoma ikuphi, kuyafaneleka ukuthi "Yeisk" - lowehlukahlukene impilo yokungcebeleka, lapho uquqaba welapha ezihlukahlukene nezifo. Nakhu kufika abantu abanezifo kwesikhumba nezicubu ongama.
Ngaphezu kwalokho, lokhu resort Yeisk ephatha yezifo izinhlelo sezinzwa futhi zemisipha. Okubonisa ngokuba spa nokungcebeleka zokwelapha nazo ezihlukahlukene iziyaluyalu isimiso sokujikeleza kwegazi nokucindezeleka zokuphefumula. Kukhona futhi amakamelo jikelele zokwelapha lapho odokotela wahlanganyela nokuvuselelwa jikelele isiguli.
On insimu afanelekayo kahle gynecologists, urologists kanye nomsebenzi, kanye otolaryngologists. Ngaphezu kwalokho, kukhona lesigceme ezingane, njengoba resort umnakekela nokwelashwa kwezingane.
Yini umthombo okhethekile kungokwenkampani resort Yeysk? "Yeisk" itholakala eduze koLwandle Azov. amanzi oLwandle futhi isimo sezulu esifudumele ngokwako nomphumela ozuzisayo isimo umzimba kanye inhlalakahle izivakashi. Ngaphezu kwalokho, kukhona eziningi imithombo yamanzi amtoti. Silnomineralizovannye amanzi fetid esetshenziselwa ukwelashwa zendawo, futhi okuphansi-amatshe aligugu - okuphuza. Kukhona futhi sulfide yezokwelapha daka odakeni.
Yini ukwelashwa kulesi sibhedlela etholakalayo "Yeisk"? Ukwelashwa, ukuzivikela ezifweni nangesidingo izifo ezihlukahlukene. Kodwana indlela ethandwa kakhulu kuyinto balneotherapy - iparele, hydrogen sulfide emoyeni elomile, okugeza iodine-uxhumano lokudlulisa, kanye ngenkasa izifo zabesifazane, amanzi traction ovundlile yomgogodla kanye eshaweni kwamanzi. Yiqiniso, ekwelapheni ukusetshenziswa ukungcola - lokhu udaka intracavitary, nezinhlelo zokusebenza ongaphandle.
hardware Ngaphezu kwalokho, iziguli ahlinzekwa futhi ukwelashwa ngokomzimba - a UHF, UV-ngemisebe, ukushukuma kagesi imisipha, kagesi, galvanizing, indawo darsonvalization, ukwelashwa ultrasonic, phototherapy, electrophoresis usebenzisa imithi ngamunye akhethiwe.
Kukhona ezinye izindlela zokwelapha, isibonelo, ezihlukahlukene lapho ephefumula, aromatherapy yokwelapha i-ozone, ukwelashwa umsebenzi, elashwe ngokomzimba futhi hydrotherapy, speleotherapy, ukuvala abacaphuni abangobe, ukuqapha purgation. Lokhu kwahambisana by yokudla efanele futhi, yebo, kusiza ukuxazulula izinkinga eziningi.
Phela, phakathi nendawo zokuxilonga athuthukile. Baqhuba izifundo ezihlukahlukene, kuhlanganise ukuhlolwa kwamakhemikhali negazi ekuhlolwa amazinga ama-hormone.
izimo zokuphila, incazelo amakamelo
Yini yokuhlala inikeza resort Yeisk? "Yeisk" - impela kahle isikhungo esikhulu, inikeza izivakashi zalo isheke kwelinye lamakamelo ukhululekile 400. Ensimini ka zokungcebeleka kukhona kokubili amakamelo olulodwa futhi double, futhi igumbi okunethezeka.
Kungakhathaliseki isigaba, zonke amakamelo anemisila impahla edingekayo, kuhlanganise namathelevishini nezingcingo. Kukhona iqoqo egcwele ifenisha - .. Imibhede, ikhabethe, izihlalo, amatafula, SOFAS, njll ivulekile yokugezela eshaweni, ungahlala ukuthatha. Ikamelo has a yangasese.
Amandla supply wesifunda kuleli yokungcebeleka
Ngokushesha kuyafaneleka ukuthi ensimini ka kulesi sibhedlela Inekamela lokudlela elikhulu, lapho cishe zonke iziguli kungabhekwana kanyekanye.
Intengo kuhlanganisa ukudla egcwele. Futhi izitsha abazimisele oda lapha, ngoba esikhathini esiningi, odokotela ukwenza holidaymakers ngakunye Ukudla ngokuvumelana samanje banayo izifo. Izidlo kukhona kuphela wezokudla, okuyinto akuphazamisi ukunambitheka omuhle.
Ngo ingcosana, ungakwazi ngaso sonke isikhathi ukuthola yokudlela noma cafe eseduze, njengoba sisekhona endaweni yokungcebeleka.
Yiqiniso, ogwini loLwandle Azov has zonke izimo ephelele lolwandle iholide. Ayikho ngaphandle, futhi kule ndawo yeholide Yeisk. "Yeisk" itholakala at ibanga 1,500 amamitha kusukela enhle, lolwandle uzilungise isihlabathi esithambile. Yiqiniso, ngaphambi kokuba engafinyelelwa ngezinyawo, kodwa kulesi sibhedlela emini njalo ushayela yokudlulisa okuyinto ethatha izivakashi ezindaweni zokungcebeleka kanye emuva.
Ngesikhathi sebehlezi ogwini amaholide nge sunbeds, izambulela nezinye Izinsiza. Futhi-ke, uyoba nethuba ukudlala i-volleyball yasolwandle, ukugibela isikebhe futhi wenze ezinye, ezemidlalo amanzi engengaphansi ezithakazelisayo.
Yiqiniso, Yeisk sibhedlela - "Yeisk" - inikeza uhla egcwele services. Okokuqala-ke Kuyaphawuleka ukuthi kukhona epaki imoto. Imisebenzi nelondolo. Ungaba isikhathi esikhulu wezincwadi, okuyinto iqoqo uqinisekile ukuba ngilidlulisele abalandeli ezincwadi.
Sibhedlela inikeza amaklayenti ukusebenzisa isikhungo yezimonyo, alinikela ezihlukahlukene zokwelapha ekuvuseleleni futhi eziphumulele. Kukhona ngisho salon izinwele ukuthi nakanjani kwathokozisa beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni abesifazane.
Ensimini ka zokungcebeleka nethuba ukwenza nemidlalo. Kukhona zemidlalo i-basketball, volleyball ne mini-football. Ungasebenzisa futhi ejimini, okuyinto ugcwele nezinto ezidingekayo. Nokujabulisa kukhona Billiard ikamelo kanye slot machines.
Yiqiniso, indawo isivakashi njalo elibamba ezihlukahlukene izinkambo sabo enkabeni yedolobha bakhangisa ogwini. Futhi maphakathi Yeisk has a esikhulu amanzi ipaki, oceanarium, dolphinarium, lapho ungaba nesikhathi esihle.
"Yeisk" (sibhedlela): intengo izimvume
Yiqiniso, okokuqala iziguli kanye nje amaholide abanesifiso umbuzo kangakanani kuwufanele abahlala endaweni sibhedlela. Kufanele kuqashelwe lapha ukuthi bonke kuncike ngokuyinhloko ubude ukuhlala, kanye nenani ezikhethiwe. Sibhedlela inikeza izaphulelo izinsuku ezingu-12, 15, 18, 21 no-24. Izindleko abahlala endlini eyodwa ivela 3300 ruble 4200 ngosuku. Uma sikhuluma a double Igumbi ejwayelekile, intengo lapha zokhahlamba kusuka ruble ngosuku 2600 ukuze 3300. Yini emananini? Le nombolo, ukudla okunomsoco, izinqubo zokwelapha, futhi umnyango ebhishi.
Lokhu resort Yeisk inikeza izaphulelo ezikhethekile izingane bangazihluphi isihlalo ehlukile futhi welashelwa. Ingane eneminyaka ephakathi kwengu-4 kuya ku-6 ubudala ukuthola isaphulelo 14%, futhi izingane ezineminyaka engu eminyakeni 7-15 - 8%.
Sibhedlela "Yeisk": Izibuyekezo zezivakashi
Yiqiniso, ehlobo - sekuyisikhathi ukuphumula. Futhi abantu abaningi bafuna ukuhlanganisa ngayo ekwelapheni kunesidingo. Kuze kube yimanje, futhi uvakashele zokungcebeleka eziningi Yeisk. "Yeisk" - isibhedlela enkulu ngempela, elihlanganisa ukwelashwa okuphumelelayo nemibandela ehloniphekile sokuzilibazisa. Futhi iningi beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni ukushiya izibuyekezo omuhle mayelana nale ndawo. Okokuqala, bona uqaphele bomsebenzi kanye ngezilokotho ezinhle odokotela, futhi bonke abasebenzi ukunakekelwa kwezempilo - lezi zazi ukwazi ibhizinisi labo. A ekhethekile "ngiyabonga" ukusho kwabasebenzi, ikakhulukazi abapheki oweta abakhuluphele njalo nomusa futhi uzimisele ukusiza.
Izimo ezinjalo inikeza resort "Yeisk". Izimpendulo ngaye ukuqinisekisa ukuthi izimenywa nazi libanzi futhi uhlanze igumbi, kanye nokudla okumnandi efudumele, wobungane.
"Otto" umtholampilo. Umtholampilo "Otto" ku Vasilevsky Island
"PENTAVITIN" (amavithamini): imfundo, izinkomba ukusetshenziswa
Ikhabe candied: yemvelo candy iresiphi
Shop24.ru: izibuyekezo esitolo inthanethi